လပွညျ့အခြိနျအခါ ပွုဖှယျရာ ကောငျးခွငျး မင်ျဂလာ – Nyi Ma Lay
လပွညျ့အခြိနျအခါ ပွုဖှယျရာ ကောငျးခွငျး မင်ျဂလာ
By Nyi Ma LayPosted on October 20, 2021 October 20, 2021
လပွညျ့နေ့ သညျ အစီအရငျေ တှပေးဖို့ အခြိနျအခါကော ငျးအလှနျနညျး ပါးတဲ့နရေ့ကျဖွဈပါတယျ။ တဈနကေုနျကော ငျးသော အခြိနျက မရှိသလောကျ ရှားတာတှရေ့ပါတယျ။
လပွညျ့နအေ့တှ ကျအစီအရငျတှေ ဒီလအတှကျ အထှအေ ထူးမပွောပေးတော့ပါ။ ဒါကွောငျ့ဘာတှဆေောငျရှကျလို့ရမလဲ ? ဘာကုသို လျတှလေုပျရမလဲ? ဆိုတာကိွုေ ပာပေးပါ့မယျ။
လပွညျ့နေ့ ဟာ ဗုဒ်ဓဟူးနနေဲ့ တိုကျဆိုငျေ နမယျဆိုရငျတော့ ဘုရားအနကေဇာတငျခွငျးကိစ်စမြား အထူးဆော ငျရှကျလို့ကော ငျးပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ အခုထိဘုရား အနကေဇာမတငျရေ သးသူတှေ လပွညျ့နမှေ့ာ ရဟနျးသံဃာေ တှပငျ့ဖိတျပွီးဘုရားအေ နကဇာတငျလို့ အထူးကောငျးပါတယျ။
ဘုရားအနကေဇာ တငျတငျပွီးသူတှေ ကလဲ အိမျကဘုရား ဆငျးတုတျောကို ရသေပ်ပယျခွ ငျး၊ရောငျတျောဖှငျ့ခွငျး၊(လိုအပျပါက )ရှခေခြွငျးမြား ဆောငျရှကျခွငျး၊ဘုရားဆောငျ သနျ့ရှ ငျးရေးလုပျခွငျးမြား ဦးစှာပထမဆောငျရှကျပါ။
ထိုသိုဆောငျရှ ကျပွီးပါက ဘုရားရှငျအားပ နျးဆီမီးကပျလှူပွီး ဘုရားရှငျကို ယျတိုငျ ဥဒါနျးကြူးရငျ့တျောမူသော အနကေဇာတိ သံသာရံ အစခြီတဲ့ ဥဒါနျးဂါ ထာကို(၇)ခေါကျတိတိရှတျပှား ပူဇျောနိုငျပါတယျ။ ဂါထာတျော ကအောကျမှာပေး ထားပါတယျ။
(၁) “အနကေဇာတိသံသာရံ၊ သန်ဓာဝိဿံ အနိဗ်ဗသံ။
ဂဟကာရံ ဂဝသေန်တာ၊ ဒုက်ခာ ဇာတိ ပုနပ်ပနံ။
(၂) ဂဟကာရက ဒိဋ်ဌာသိ၊ ပုန ဂဟေံ န ကာဟသိ။
သဗ်ဗာ တေ ဖာသုကာ ဘဂ်ဂါ၊ ဂဟကူဋိ ဝိသင်ျခတံ။
ဝိသင်ျခါရဂတံ စိတ်တံ့၊ တဏှာနံ ခယမဇ်ဈဂါ”။
အကြိုးကြေး ဇူးကတော့ အိမျတှငျး ကကျြသရမေင်ျဂ လာရှိခွငျး၊ အနှောကျအယှကျပေ ယာဂကငျးဝခွေငျး၊ မိသားစုအေးခမျြးခွငျး၊ မိသားစုအတှငျး ကပျရောဂါက ငျးဝေးခွငျး အကြိုးကိုရရှိစပေါတယျ။
တဈဆကျတ ညျးပွောလိုတာက ဒီနမှေ့ာ ငှကွေေး စတငျစုဆောငျးခွငျးကိ စ်စမြားဆောငျရှ ကျနိုငျပါတယျ။ ငှမေမွဲဖွဈနေ သူမြား၊ငှကွေေးလာ ဘျရှငျလိုသူမြား၊ ငှကွေေးအေ လအလှငျ့နညျးပါးလို သူမြားအတှကျအေ ကာငျးဆုံး အစီအမံဖွဈပါလိမျ့မယျ။
လပွညျ့နေ့ မနကျ ၁၀ နာရီ ၂၂ မိနဈကနေ ၁၁ နာရီ ၄၉ မိနဈအတှငျး မိမိလကျထဲရှိတဲ့စုမဲ့ငှတေ ဈခြို့ကို စုဘူးထဲဖွဈစေ၊ မိမိသိမျးနကြေ အိတျထဲဖွဈစေ၊ ဗီဒိုထဲဖွဈစေ၊ မီးခံသေ တ်တာထဲဖွဈစေ၊ မိမိသိမျးလိုတဲ့ေ နရာတဈခုခုမှာ စတငျသိမျးဆညျး စုဆောငျး လိုကျပါ။
စတငျစုဆောငျး မဲ့ငှကေို စာအိတျအနီ နဲ့ဖွဈစေ၊ပိတျစအ နီနဲ့ဖွဈစေ၊အိတျအ နီနဲ့ဖွဈစေ ထညျ့ထားရငျပိုကောငျးပါတယျ။ နောကျရကျေ တှမှာ ရလာမဲ့ငှထေဲက မိမိစုခငျြတဲ့ ငှပေမာဏ ကိုထပျထပျထညျ့ပွီး စုသှားပါ။ ငှကွေေးကိစ်စတျောေ တျာမြားမြားအ ဆငျပွပေါလိမျ့မယျ။
ငှလေဲ မွဲလာလိမျ့မယျ။ ငှစေုရခ ကျသူမြား…စုလိုကျ–ကုနျလိုကျဖွဈနသေူမြား၊ ငှအေလအေလှငျ့ မြားနသေူမြား အထကျပါအ တိုငျးဆောငျရှကျကွညျ့ပါ။ အကြိုးထူးပါလိမျ့မယျ။
ကောငျးသောဆန်ဒတှလေဲ လပွညျ့ဝနျးပမာ အပွညျ့အဝရရှိခံစားနိုငျကွပါစေ ငွိမျးအေးလူ ၀၉၇၇၅၅၅၅၆၉၅
လပြည့်နေ့ သည် အစီအရင်ေ တွပေးဖို့ အချိန်အခါကော င်းအလွန်နည်း ပါးတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေကုန်ကော င်းသော အချိန်က မရှိသလောက် ရှားတာတွေ့ရပါတယ်။
လပြည့်နေ့အတွ က်အစီအရင်တွေ ဒီလအတွက် အထွေအ ထူးမပြောပေးတော့ပါ။ ဒါကြောင့်ဘာတွေဆောင်ရွက်လို့ရမလဲ ? ဘာကုသို လ်တွေလုပ်ရမလဲ? ဆိုတာကိြုေ ပာပေးပါ့မယ်။
လပြည့်နေ့ ဟာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နဲ့ တိုက်ဆိုင်ေ နမယ်ဆိုရင်တော့ ဘုရားအနေကဇာတင်ခြင်းကိစ္စများ အထူးဆော င်ရွက်လို့ကော င်းပါတယ်။
ဒါကြောင့် အခုထိဘုရား အနေကဇာမတင်ရေ သးသူတွေ လပြည့်နေ့မှာ ရဟန်းသံဃာေ တွပင့်ဖိတ်ပြီးဘုရားအေ နကဇာတင်လို့ အထူးကောင်းပါတယ်။
ဘုရားအနေကဇာ တင်တင်ပြီးသူတွေ ကလဲ အိမ်ကဘုရား ဆင်းတုတော်ကို ရေသပ္ပယ်ခြ င်း၊ရောင်တော်ဖွင့်ခြင်း၊(လိုအပ်ပါက )ရွှေချခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ဘုရားဆောင် သန့်ရှ င်းရေးလုပ်ခြင်းများ ဦးစွာပထမဆောင်ရွက်ပါ။
ထိုသိုဆောင်ရွ က်ပြီးပါက ဘုရားရှင်အားပ န်းဆီမီးကပ်လှူပြီး ဘုရားရှင်ကို ယ်တိုင် ဥဒါန်းကျူးရင့်တော်မူသော အနေကဇာတိ သံသာရံ အစချီတဲ့ ဥဒါန်းဂါ ထာကို(၇)ခေါက်တိတိရွတ်ပွား ပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ ဂါထာတော် ကအောက်မှာပေး ထားပါတယ်။
(၁) “အနေကဇာတိသံသာရံ၊ သန္ဓာဝိဿံ အနိဗ္ဗသံ။
ဂဟကာရံ ဂဝေသန္တာ၊ ဒုက္ခာ ဇာတိ ပုနပ္ပနံ။
(၂) ဂဟကာရက ဒိဋ္ဌာသိ၊ ပုန ဂေဟံ န ကာဟသိ။
သဗ္ဗာ တေ ဖာသုကာ ဘဂ္ဂါ၊ ဂဟကူဋိ ဝိသင်္ခတံ။
ဝိသင်္ခါရဂတံ စိတ္တံ့၊ တဏှာနံ ခယမဇ္ဈဂါ”။
အကျိုးကျေး ဇူးကတော့ အိမ်တွင်း ကျက်သရေမင်္ဂ လာရှိခြင်း၊ အနှောက်အယှက်ပေ ယာဂကင်းဝေခြင်း၊ မိသားစုအေးချမ်းခြင်း၊ မိသားစုအတွင်း ကပ်ရောဂါက င်းဝေးခြင်း အကျိုးကိုရရှိစေပါတယ်။
တစ်ဆက်တ ည်းပြောလိုတာက ဒီနေ့မှာ ငွေကြေး စတင်စုဆောင်းခြင်းကိ စ္စများဆောင်ရွ က်နိုင်ပါတယ်။ ငွေမမြဲဖြစ်နေ သူများ၊ငွေကြေးလာ ဘ်ရွှင်လိုသူများ၊ ငွေကြေးအေ လအလွင့်နည်းပါးလို သူများအတွက်အေ ကာင်းဆုံး အစီအမံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
လပြည့်နေ့ မနက် ၁၀ နာရီ ၂၂ မိနစ်ကနေ ၁၁ နာရီ ၄၉ မိနစ်အတွင်း မိမိလက်ထဲရှိတဲ့စုမဲ့ငွေတ စ်ချို့ကို စုဘူးထဲဖြစ်စေ၊ မိမိသိမ်းနေကျ အိတ်ထဲဖြစ်စေ၊ ဗီဒိုထဲဖြစ်စေ၊ မီးခံသေ တ္တာထဲဖြစ်စေ၊ မိမိသိမ်းလိုတဲ့ေ နရာတစ်ခုခုမှာ စတင်သိမ်းဆည်း စုဆောင်း လိုက်ပါ။
စတင်စုဆောင်း မဲ့ငွေကို စာအိတ်အနီ နဲ့ဖြစ်စေ၊ပိတ်စအ နီနဲ့ဖြစ်စေ၊အိတ်အ နီနဲ့ဖြစ်စေ ထည့်ထားရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ နောက်ရက်ေ တွမှာ ရလာမဲ့ငွေထဲက မိမိစုချင်တဲ့ ငွေပမာဏ ကိုထပ်ထပ်ထည့်ပြီး စုသွားပါ။ ငွေကြေးကိစ္စတော်ေ တ်ာများများအ ဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
ငွေလဲ မြဲလာလိမ့်မယ်။ ငွေစုရခ က်သူများ…စုလိုက်–ကုန်လိုက်ဖြစ်နေသူများ၊ ငွေအလေအလွင့် များနေသူများ အထက်ပါအ တိုင်းဆောင်ရွက်ကြည့်ပါ။ အကျိုးထူးပါလိမ့်မယ်။
ကောင်းသောဆန္ဒတွေလဲ လပြည့်ဝန်းပမာ အပြည့်အဝရရှိခံစားနိုင်ကြပါစေ ငြိမ်းအေးလူ ၀၉၇၇၅၅၅၅၆၉၅
Previous post ပုံမှနျလူတှထေကျ အားနညျးခကျြမြားစှာနဲ့ မှေးဖှားလာခဲ့သျောလညျ တက်ကသိုလျမှ ဘှဲ့ ၂ ခုထိရရှိပွီး တဈနှဈလြှငျ ၅ ဘီလီယံ ဝငျငှရေရှိနတေဲ့ အမြိုးသမီး
Next post ပုရဈကွျော အရမျးကွိုကျတဲ့ သူတှေ ဝငျသာ ဖတျကွညျ့တော့ဗြာ